Turki Beach Tours Xeebaha xeegada - Dial Now 993-702-7574
Turki Beach Tours
In la xoqo daaweynta dabiiciga ee nasashada? Sanduuqa Qumaanka ee 'Sandy Beach Tours' waa jawaabta ugu fiican. Odisha waa mid ka mid ah dawladaha ugu khatarta badan ee ku saabsan xad-dhaafka 485 ee xeebaha jilicsan. Waxaa la barakeeyey biyo cad cad oo qurux badan, oo ay ku xiran yihiin qaar ka mid ah kuwa ugu caansan oo ugu caansan duniga waa inay bixiyaan. Sanduuqa cagaaran ayaa bixiya xirmada ugu fiican ee loogu talagalay Turki Beach Tours. Waa meesha ugu fiican ee lagu qalo markaad qaadato muraayadaha qurxinta. Meelo badan oo ka mid ah duulimaadyada sii kordhaya, xeebaha Odisha ayaa noqda kuwo aad u badan oo la heli karo, oo abuuraya waddo aan toos ahayn oo aad ku qaadato safarkaaga riyadu. Odisha waa meel aad u wanaagsan oo sanadka oo dhan ah, oo leh cimilo qurux badan dhammaan xilliyada. Ma aha oo kaliya, xeebta ballaaran ee ballaaran waxaa loola jeedaa in xeebaha xeebaha ee Odisha ay aad u kala duwan yihiin iyadoo ku xiran meesha. Xeebaha Odisha waxay kala duwan yihiin in ay dhiirigeliyaan kala duwanaansho nafsaaniga ah si ay u dhisaan dhisme heer caalami ah, casho qurxan oo lagu nasto xasilloonida, taas oo ka dhigaysa meesha ugu fiican ee dalxiisayaasha ka soo jeeda dhammaan dhinacyada nolosha ee doonaya fasaxa noloshooda. Bandhigyada Odisha Beach waxay daboolayaan dhamaantood. Ma jirto hab wanaagsan oo lagu baranayo raaxaysigaas oo ku yaala xeebahaas oo aad u sarreeya marka loo eego Sandbirdhiga Sandbalka 'xeebaha xeebaha Odisha Tours.
Baakadahani waxay bixiyaan qaar ka mid ah goobaha ugu quruxda badan Odisha waa inay bixiyaan, halka ay sidoo kale kaa qaadayaan waddada la garaacay. Hagahaaga aqoonta leh ayaa ku hogaaminaya tours cajiib ah oo ay ka mid tahay inaad ku raaxaysato cuntooyinka delicious iyo dhabta ah ee ku baahsan gobolka oo dhan. Ma jiraan wax la mid ah sida cagahaaga cagahaaga ku dhex qulqulaya ciidda iyo qoyanaanta qorraxda quruxda badan ee Asia. Dhibaatooyinkaaga iyo walaacaaga oo dhan waxay ku dhaqmi doonaan biyaha buluuga ah, oo kuugu raaxeysta xaalad xasilooni ah oo aanad ogeyn.
Haddii aad diyaar u tahay inaad la kulanto quruxda aan dhammaadka lahayn ee xeebahaas oo aad u sarreeya, fadlan nagala soo xiriir maanta waxaanan kaa caawinaynaa sidii aad u heli lahayd safarka xeebta ee ugu fiican ee Odisha. Waxaanu kuugu soo bandhigaynaa dalxiisayaasha ugu fiican dalxiiska ee Odisha, oo ay ku jiraan Xeryaha xeebaha ee Odisha, si aad u heshid wakhti gaaban oo leh Sandbirdhac 'Tourism Odisha Beach.
ODISHA WAXAA LAGA HELAYAA WAALIDKAMaalinyada / 9 maalmood | Code Code: 008)
La kulan oo salaamo imaatinka garoonka diyaaradaha ee Kolkata / Saldhigga Tareenka iyo u wareejinta hoteelka horay loo dhigey. Dayactirka maalinta oo bilaash ah waxqabadyada gaarka ah. Habeenimo oo ah Kolkata.
DAY 02: KOLKATA - BALASORE - CHANDIPUR
Kadib quraac ka dib booqasho ay ku tagtay Kolkata iyo subaxdii saldhigga tareenka si ay tareen ugu raacaan Balasoor. Soo qaado saldhigga tareenka Balasoor iyo u wareejinta Chandipur. Ka hubi hudheelka. Habeenimaadkii Chandipur.
DAY 03: CHANDIPUR
Maalinta oo dhan waxay ku raaxeysaneysaa Chandipur Beach. Habeenimaadkii Chandipur.
DAY 04: CHANDIPUR - BHUBANESWAR
Arbacada ka dib quraacda waxay u safreysaa Bhubaneswar booqan kartaa Ratnagiri, Udayagiri iyo Lalitgiri (macbudyada Budistiska iyo Stupas). Habeenimadii beri ee Bhubaneswar
DAY 05: BHUBANESWAR - KONARK
Booqashada subaxnimada ee Temples ee Bhubaneswar (Parsurameswar, Mukteswar, Lingaraj, Rajarani & Vaital). Kadibna u gudub waddada Konark oo booqanaysa jidka Dhauli (Ashokan Edicts) & Pipli (Appliqué tu Village). Fiidkii habeenkii ee u dhow webiga badda isku xiraya oo ku nasanaya xeebta. Habeenimadii Axaddii.
DAY 06: KONARK - PURI
Ka dib quraacda booqo Konark Sun Temple (Black Pagoda), Chandrabhaga Beach iyo Ramchandi Temple.Then gaari Puri ka hubi hudheelka. Galabtii galabtii booqashada Lord Jagannath Temple si looga qaybgalo Live Aalati Darshan. Abaalku wuxuu ku nastaa Baaskiilada Dahabka & Suuqa Beach ee Puri. Habboon habeenkii Puri.
DAY 07: PURI - GOPALPUR
Booqashada subaxnimada ee macbadka Lord Jagannath (Kuwa aan Hindus ahayn lama oggola gudaha gudaha), Gawaarida Weyn Ka dib quraac ayaa u socdaalay Gopalpur booqanaya Raghurajpur (tuulada Heritage) iyo Chilika Lake ee Barkul. Ku raaxee doonida doonnida badda gudaheeda si aad u aragto Kalijai Island iyo Nalaban Birds Island.Overnight at Gopalpur.
DAY 08: GOPALPUR - TAPTAPANI - GOPALPUR
Ka dib markaad quraacdo booqo Tartapani Hot Sulfur Spring. Saacadaha quruxda wuxuu ku nastaa Gopalpur Beach. Habeenkii Gopalpur.
DAY 09: DEPARTURE- BERHAMPUR RAILWAY STATION / BHUBANESWAR AIRPORT
Kadib markii quraacdu u socdaan Berhampur Railway Station / Bhubaneswar Airport safarka sii socda.